I-iPhone 5 esikhundleni sibhethri yangempela ishintshe ibhethri entsha China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-iPhone Battery > I-iPhone 5 Ibhetri > I-iPhone 5 esikhundleni sibhethri yangempela ishintshe ibhethri entsha
I-iPhone 5 Ukushintshwa Kwebhethri Yokuqala Yhintsha Ukusekelwa kwebhetri entsha iOS update
Lena yinto yokuqala okudingeka ukwazi ngayo nge-iPhone isikhathi sokuphila kwebhethri ngamakhilomitha angu-500 ngokujwayelekile. Umjikelezo wokukhokha ukuthi ibhethri yakho ithatha isikhathi esingakanani ukuze ufinyelele ku-100%. Ungayikhokhisa kusuka ku-40% kuya ku-100%, okusho ukuthi ube ngu-60% ngomjikelezo. Ngisho nangemva kokushaja iyunithi yakho, udinga ukusebenzisa ngaphezulu 40% ukuqedela lowo mjikelezo wangempela. I-iPhone entsha ye-Battery ishintshe ukusekela iOS i-update yenza kusuka ku- 100% cobalt cell ehlanzekile ne-AAA Original TI IC. I-iPhone 5 Battery entsha iyahambisana ne-16GB, iyafaneleka ngekhodi ye-APN: 616-0 610, 616-0611, 616-0613. Awukwazi ukufanelana ne-iPhone 5S noma iPhon e 5C.
Kungani sincoma i-iPhone5 Battery Replacement nge- TI IC ?
-MOQ: 100pcs izinto ngayinye - Ukushisa okusebenzayo: 0-50 ℃ * Ukusekela i-APPLE kugcina iOS ivuselelwe
Not Second-hand iPhone 5 Battery